“Lionel Messi waxa uu xirfaddiisa ciyaareed ku soo gabagabayn doonaa Barcelona” – Madaxweyne Bartomeu – Gool FM
(Barcelona) 06 Luulyo 2020. Waxaa la shaaciyey in kabtan Lionel Messi uu xirfaddiisa ciyaareed ku soo gabagabayn doono kooxda Barcelona, sida uu qabo madaxweynaha naadigaas.
Madaxweynaha Kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa shaaca ka qaaday in Lionel Messi uu xiraddiisa ciyaareed ku soo gabagabayn doono Kooxda Barca.
Xiddiga xulka qaranka Argentine ayaa markale la la xiriiriyey todobaadyadii dhowaa macquul ahaanshaha uu kaga tagi karo garoonka Camp Nou, laakiin Bartomeu ayaa qiray in Messi uu sii joogi doono.
“Messi ayaa sheegay inuu ku soo gabagabeyn doono noloshiisa shaqo iyo kubadda cagta kooxda Barcelona” Bartomeu ayaa sidaas u sheegay Spanish network Movistar kaddib markii kooxdiisa ay xalay 4-1 ku garaaceen Villarreal kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga.
“Ma rabo inaan wax badan sharraxo, waayo waxaan diiradda saareynaa tartanka, waxaana wada hadallo kula jirnaa ciyaartoy badan, balse Messi ayaa noo sharraxay inuu doonayo sii joogista halkaan, sidaas darteedna, waxaan la qaadan doonna waqti dheer oo qurux badan isaga.” ayuu hadalkiisa ku daray Bartomeu.